Mamoha Ilay Fifandonana Zeorziana-Armeniana Taloha Ilay Fifandirana Momba Ny Fiangonana Iray · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2017 15:47 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, Italiano, Français, 繁體中文, polski, English
Katedralin'i Kumurdo, fiangonana Zeorziana tamin'ny taonjato fahafolo ao amin'ny tanàna kely betsaka Armeniana izay sehatra nisehoan'ny fifandonana momba ny lovan'ilay fiangonana. (sary: Wikimedia Commons, Jaba1977)
Ity manaraka ity dia lahatsoratra fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org nosoratan'i Joshua Kucera. Navoaka indray rehefa nahazoana alàlana.
Nampihendratrendratra sy niteraka tahotra be hoe hizotra ho any amin'ny adim-poko ny fifanolanana naterak'ilay fifandonana momba ny ady fiangonana tany amin'ny faritra iray betsaka Armeniana any Zeorzia.
Tany Kumurdo, tànana kely saika feno foko Armeniana ao amin'ny faritr'i Samtskhe-Javakheti manamorona an'i Armenia no nisian'ilay fifandonana. Ao amin'io tanàna kely io no iorenan'ilay fiangonan'ny taonjato fahafolon'i Zeorzia, ny katedralin'i Kumordo, izay nanaovan'ny ministeran'ny Kolontsaina Zeorziana asa fanarenana.
Nisy fasana vitsivitsy hita nandritra io asa io. Nampiasain'ny Aremiana io fiangonana io nandritra ny taonjato roa farany , ary tamin'ny 30 Septambra nisy vondron'olona tao an-toerana nitondra khachkar iray – tsangambatom-pahatsiarovana nentim-paharazana armeniana – nankeny amin'ilay fiangonana mba hametraka izany ao amin’ ilay toerana izay inoan'izy ireo fa ilevenan'ny razambeny.
Tsy navelan'ny mpitandro filaminana hiditra tao am-piangonana ry zareo, ary dia niha-henjana ny toe-draharaha, niaraka tamin'ny tora-bato nataon'ny mponina tao an-toerana ny mpitandro filaminana izay niantso fanampiana tamin'ny vondrona manokana mpandrava korontana. Mpitandro filaminana efatra no voalaza fa naratra , ary olona roa avy ao an-toerana no voasambotra. Nilamina ihany ilay toe-draharaha rehefa nankany amin'ilay tanàna kely ny Minisitry ny atitany, Giorgi Mgebrishvili, ka nihaona tamin'ny solontenan'ny mponina tao an-toerana.
Any amin'ny faritra iray feno adim-poko, ny foko Armenianin'i Zeorzia (tokotokony ho dimy isan-jaton'ny mponina araka ny fanisambahoaka farany) dia azo lazaina ho milamina ihany. Fa ity tranga ity no atahorana hampiova izany.
” Nampahatsiahy ilay adim-poko nahatsiravina tamin'ny fiandohan'ny taona 90 ireo fifandonana ireo” hoy ny filazan'ny tranonkalam-baovao Democracy & Freedom Watch.
Tsy azo ihodivirana, fa nisy ireo karazana fiampangana fa hoe “fihantsiana” io fifandonana io. Maro no nanamarika fa taloha kelin'ny fifidianana monisipaly tany Zeorzia no nisehoan'io sombin-tantara io. Solombavam-bahoaka iray avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana, Georgian Dream, sady mpikambana amin'ny vondrona Fifankatiavana Armenia-Zeorzia, David Chichinadze, no niteny tao amin'ny onjam-peom-panjakan'i Armenia fa “fihantsiana” nialoha ny fifidianana” izany.
“Nisy ireo nizara vola tamin'ny mponina tao an-tanàna. Azo antoka fa olana tokony ho vahàn'ny fiangonana sy ny mpitondra fiangonana izany, nefa misy olona te-hamadika izany ho resaka politika,” hoy i Chichinadze, fa tsy nanonona izay mety ho mpanakorontana izy.
“Na dia ireo Armeniana any Javakheti aza dia mihevitra fa “mampisalasala “ny vahoakan'i Kumurdo, hoy ilay Zeorziana iray mpanadihady, Mamuka Areshidze. “Tsy tsara ny lazan'izy ireo. Tanàna tena mety hisintona mankamin'ny heloka bevava i Kumurdo. Tsy avahako fa ny ” fijaliana” niaretan'ny vahoaka ao Kumurdo dia nampiasain'ny sasany mba hanararaotana ilay toe-draharaha sy handrehetana fifandonana, amin'ny fampiasana ireo fitakiana mikasika ilay fiangonana.”
Ny sasany, na izany aza, dia nihevitra fa fandranitana avy amin'ny mpitandro filaminana Zeorziana izany. ” Araka ny loharanom-baovaoko, tamin'ny andro nitrangan'ilay fifandonana dia tsy nihevitra ny hanangana ilay khachkar ny mponina ao Kumordo, fa ny hametraka izany aminà toerana iray azo antoka, ao an-tokotanim-piangonana”, ary nihevitra fa amin'ny faran'ny volana Oktobra no hananganana azy, hoy i Johnny Melikian, manampahaizana Armeniana momba ny fifandraisana amin'i Zeorzia. Tafahoatra ny fihetsiky ny mpitandro filaminana hoy i Melikian. “Araka ny hevitro, nisy ny fandranitana. Nanomboka ny fifandonana, izay nampiasan'ny mpitandro filaminana hery mafimafy kokoa noho izay nilaina, ary avy eo niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana mpandrava korontana,” hoy izy.
Fivoarana mampanahy izany na fandranitana na tsia. ” Ity trangan-javatra ity dia tahaka ny voa latsaka amin'ny tany efa lonaka tsara amin'ny fankahalàna vahiny, indrindra fankahalana Armeniana, naparitaky ny sasany, indrindra ireo mpomba ny Rosiana, any Zeorzia,” hoy ny soratra nataon'i Dmitry Avaliani, Zeorziana mpanao gazety, ao amin'ny pejy Facebook-ny.
“Vonona ny fifandonana : alain'ny Armeniana ny fiangonana Zeorziana amin'ny fomba fijerin'ny Zeorziana ; ny mifanohitra amin'izany kosa ny an'ny Armeniana. Nandritra ny 25 taona nahazoana ny fahaleovantena, na misy aza ny adiady madinika sasany, dia voasakanay mba tsy ho tonga ady goavana izany aty Samtskhe-Javakheti,” hoy hatrany i Avaliani nanohy. ” Ankehitriny, feno ny fepetra rehetra mety hihomboan'io toe-draharaha io — fankahalana vahiny izay niotrika an-taonany maro, ny fahalemen'ny andrim-panjakana, ny tsy fisian'ny politika mazava ho an'ny fampandrosoana ny faritra sy ny foko vitsy an'isa, ary ny tombontsoa betsaka ananan'ireo namantsika any Avaratra, izay misitraka ny fahalalahana tanteraka hitondra ny hetsika fanakorontanany aty Zeorzia.”
Fintinin'i Avaliani amin'ity teboka manan-danja ity ny lahatsorany : ” Ny hany zavatra tsara : tsy tombontsoa ho an'i Yerevan ny mandrava ny fifandraisana amin'i Zeorzia.” Na eo aza ny fihenjanana tsindraindray, sy ny maha-ao anatinà vondrona jeopolitika mifanohitra ( mpikambana amin'ny Firaisan'i Eoropa sy Azia ary ny fiombonan'ny fifanarahana momba ny fiarovana Iombonana amin'ny tranga any Armenia, ary ny solontenan'ny OTAN sy ny Firaisambe eoropeana any Zeorzia), samy mila tsara fifandraisana ireo firenena anankiroa mifanolo-bodirindrina ireo. Noho izany dia tsy tokony tsy ho lasa lavitra izany, na iza na iza mety mihantsy izany.